तातो पानि खाने बानि छ? यी कुरा एकचोटी नछुटाई पढ्नुहोस है - Sano Aawaj
तातो पानि खाने बानि छ? यी कुरा एकचोटी नछुटाई पढ्नुहोस है
३० कार्तिक २०७८, मंगलवार November 16, 2021 by sanoaawaj
मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा ३ सय ७७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ९ हजार १४९ जनाको आरटी–पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा ३ सय ७७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार ६ हजार ५०५ जनाको आरटी–पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा ३ सय ३९ जना र २ हजार ६४४ जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा ३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या ९ लाख १२ हजार ८४६ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा १७० जना कोरोनामुक्त भए, ४ को मृत्यु
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ सय ७० जना निको भएर घर फर्किएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेहरुको संख्या ७ लाख ९८ हजार ७१४ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ९ हजार १४९ जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल ५२ लाख २२ हजार ९४६ जनाको पीसीआर–एन्टिजेन परीक्षण भएको छ ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४ संक्रमितको मृत्यु भएको छ । हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार ४८२ पुगेको छ ।
Prevबुल्दि किनारमा झुन्डिएको अवस्था महिलाको शव फेला, हत्याको आशंका
Nextकोरोना भाईरसका कारण अमेरिकाका एक लाख ४० हजार बच्चा अभिभावक विहिन